Zombie Iikhomputha kunye neBotnet Malware - I-Semalt Expert inikezela impendulo enoba zilungile okanye zibi kwikhompyutha yakho
Ikhompyutheni ye-zombie iyisistim edibeneyo kwi-intanethi ehlaselwe ngabacuki. Isetyenziswe kwimisebenzi enobungozi kunye neebhodesi ze-Zombies zisetyenziselwa ukusasaza ugaxekile nge-imeyile. Ikwazisa kwakhona ukuhlaselwa kweenkonzo. Abanikazi bekhompyutheni be-zombie abazi nokuba iinkqubo zabo zonakaliswe njengoko ezi nkqubo zisebenza ngokuthula kwaye zihlasela inani elikhulu leefayile. UFrank Abagnale, u-8 (Semalt uMphathi weNtuthuko yabaThengi, uthi ukuhlaselwa kweDDoS ngamabhodnethi kufana nokuhlaselwa kwe-zombie, kunye neendlela ezahlukeneyo zekhomputha okanye abasebenzisi abasebenzisa i-bots. I-malnet ye-botnet yiqoqo leenombolo ezininzi ze-intanethi ezixhunyiwe kumbane okanye kwiikhomputha zompompo, nganye eqhuba ibhothi ethile. Iibhentshi zisetyenziselwa ukwenza iintlobo ezahlukeneyo zokuhlaselwa kweenkonzo, ukuwaba idatha, vumela abahlaseli ukuba bafikelele kwisixhobo sakho, kwaye bathumele ii-imeyli ze-spam okanye iinqununu zokuphangisa kwinani elikhulu.
Akukho yonke i-botnet malware kunye nekhompiyutha ye-zombie ayibi:
Kufuneka uhlale ukhumbule ukuba akuzona zonke iintlobo ze-botnets eziyingozi kunye nezimbi. Ngokomzekelo, ezinye iinkampani ze-antivirus ziqhubeka zihlaziya iinkqubo zazo ngoncedo lweebhodnesi kunye nabasebenzisi kufuneka balandele imithetho nemimiselo yabo. IMicrosoft ivuselele imigaqo-nkqubo yayo kwaye ivelise uluhlu lweebhentshi ezinobungqina bomsebenzisi kunye nokukhusela ukuhlaselwa kweebhentshi ezinobungozi. Ngaloo ndlela, ukufaka ezo zitshixo kumatshini wakho akuyona yingozi kuzo zonke kwaye akufanele kuthatyathwe ngokungenanto..I-Botnets zenziwe xa iinkqubo ezinobungozi okanye iintsholongwane zingena kwisixhobo. Umlawuli we-botnets uqondisa imisebenzi ethile kwiidivaysi ezicwangcisiweyo ngeendlela zokunxibelelana ezifana ne-HTTP kunye ne-IRC. Iibhentshi ziqeshwe ngabahlaseli be-cyber ngeenjongo ezahlukeneyo.
Indlela yokuhlala uphephile kwi-intanethi?
Kufuneka ufake ifayile ye-anti-malware okanye inkqubo ye-antivirus ekufuneka ibe yinto yokuqala kunye nehlawuliweyo ukukhuphula ukhuseleko lwakho lwe-intanethi. Ngaphandle koko, akufanele unqakraze kwizikhonkco ezisolisayo kunye neentengiso ezikhazimulayo kunye neefestile zokuvota akumele zivulwe njengoko zinokuba ne-bots kwinani elikhulu.
Izigidi zezigidi zee-PC ziye zatshatyalaliswa ngentsholongwane, zenza umkhosi omkhulu we-bot kwaye zenza ukuba ziba okanye zenze iinto ezizodwa zengcaciso kwi-intanethi. Ezinye i-bots ziquka amanethiwekhi amancinci kunye namakhulu amaninzi, njenge-Conficker, Zeus, Mariposa, BredoLab, kunye neZeroAccess. Bonke baya kulinda imilayezo evela kubafundi be-botmasters ngaphambi kokuba baqale ukwenza imisebenzi yabo.
Abalawuli be-botnet bavame ukuthengisa iinkonzo ze-botnet kwiibhidi ezihlawulelwayo. Abathengi bezobugwenxa bezobugcisa, amaqela ezopolitiko kunye namaqela e-crime gang online, zonke ezijolise ukuphazamisa ukuhlaselwa kwe-cyber. Iisongelo ze-botnet ziyinxalenye enkulu yezokhuseleko ze-intanethi, kwaye iibhenets ilandele inani elikhulu lokuhlaselwa kwe-phishing. Ngaloo ndlela, ukuthintela kwabo kuyimfuneko, kwaye kufuneka siyeke ukugxinwa ngabakhiye be-keyloggers, ubusela besazisi kunye nokuhlaselwa kwe-phishing. Iikhompyutha zombini zombie kunye ne-botnet malware ingakwazi ukuphazamisa amacebo akho, ngoko ke kufuneka uqaphele ngelixa usebenzisa iiwebhusayithi ezahlukeneyo Source .